भुवन केसीले छोरा अनमोलसँग एन्टी हिरो फिल्ममा स्क्रिन साझेदारी गर्दै, बाबु भिलेन, छोरा हिरो – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार १६:१५ English
भुवन केसीले छोरा अनमोलसँग एन्टी हिरो फिल्ममा स्क्रिन साझेदारी गर्दै, बाबु भिलेन, छोरा हिरो
काठमान्डौ । अभिनेता भुवन केसीले छोरा अनमोल केसीसँग स्क्रिन साझेदारी गर्न लागेको फिल्मको नाम ‘एन्टी हिरो’ जुराइएको छ । सोमबार चलचित्र विकास बोर्डमा फिल्म दर्ता गरिएको छ । तिहारपछि छायांकन सुरु हुने फिल्म दि सुपर काजल फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको हो । फिल्मको निर्माण भुवन केसीले गर्नेछन् ।
२८ श्रावण २०७६, मंगलवार ०४:४९ मा प्रकाशित
नेपाल आइन् मनिषा कोइराला	२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०९:३२
आधा दर्जन कलाकारको आवाजमा ‘हाम्रो माटो’ बोलको गीत सार्वजनिक	१० जेष्ठ २०७७, शनिबार २०:०४
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार २०:००
धनलाल योञ्जनका उत्कृष्ट ९ हाइकूहरु
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार १९:२८
स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिँदै
सुकुम्बासी आयोगको औचित्य के हो ?
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार १७:२४
काठमाडौँ, २१ जेठ । व्यवसायीहरुले लकडाउन उलङ्घनको घोषणा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको आह्वानमा बिहिबारदेखि..
काठमाडौँ, २० जेठ । एकै दिन २८८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले थप..